Maalinta: Maarso 21, 2017
Routes ayaa lagu go'aamiyey xaafadaha debedda ee Diyarbakir
Wadada waxaa lagu go'aamiyay xaafadaha bannaanka ee Diyarbakır: Iyadoo la tixraacayo baahida muwaadiniinta, degmada Diyarbakır ee Magaalo-Weyne ayaa go’aamisay wadada cusub ee gaadiidka dadweynaha ee daboolaya xaafadaha 5 ee dibedda ee degmooyinka Bağlar iyo Kayapınar iyo xirmooyinka iyo warshadaha. cusub [More ...]
Bangiyada ayaa u tartamey ATM-yada saldhigyada tareenka dhulka hoostiisa: Bangiyada dhowaan waxay u tartameen ATM-yada saldhigyada dhulka hoostiisa ku yaal ee Anatolian iyo kooxaha Yurub ee saldhigyada Metro Metro ee labada dhinac Anatolian iyo Yurub ee Istanbul. [More ...]
Akçaray Tram ayaa markii ugu horaysay la bilaabay. Night ayaa si guul leh u dhammaystiray safarkii ugu horreeyay ee gobolka Mehmet Ali Pasha ee ay bixiso Dawladda Hoose ee Magaalada Kocaeli [More ...]
Artvinli Gedik's Cable Wareeys leh
Gedik Cabled Ropeway oo ka socda Artvin: Mustafa Gedik, 52, oo go’aansaday inuu sameeyo shinnida oo ku taal jaranjarada aan lahayn dariiqa degmada Arhavi ee Artvin, wuxuu helay xal la taaban karo oo iskiis ah sababtoo ah qiimaha dhismaha buundada. Dooxada laba [More ...]
Tababbarka laga bilaabo EGO illaa Darawalada Gawaarida Gaarka ah ee Dadweynaha: Agaasinka guud ee EGO wuxuu ka gudbiyaa gaadiidka dadweynaha ee gaarka loo leeyahay (ÖTA) iyo basaska dadweynaha ee gaarka loo leeyahay (ÖHO) iyada oo loo marayo imtixaannada farsamada iyo baaritaannada dhimirka. Magaalooyin tiro badan [More ...]
Darawalada gawaarida 'Metrobus' ayaa dhacey: Dhibaatada gaadiidka dadweynaha ee dadka deggan Istanbul waxay sheegeen in loo dhibaateeyay sida darawalada magaalada. Waqtiga loo yaqaan 'Met Racing' oo leh waqti ayaa si rasmi ah nooga beddelay faras jinsi, Bir ayaa leh darawalka BRT. Subax walba dagaal ka dhaca Istanbul [More ...]
Wasaarada cunnada oo la yiraahdo
Hindiya dhexdeeda, wasaaraddu waxay maqashay oo ku saabsan ilmaha ooyaya tareenka: Wasaaradda Waddooyinka Tareenka ee Hindiya waxaa caawiyay ilmaha ku safraya tareenka. Wax ka barashada koontada warbaahinta bulshada ee dhacdada dambe ee wasaaradda tareenka ayaa u gudbisay caanaha ilmaha hooyadeed. tareenka [More ...]
Karşıyaka Buundada bir ee 150 tan ee tareenka
Karşıyaka Buundada bir ee 150 tan ee taraam: İzmir Magaalo-Weyne Karşıyaka Rakibaadda buundada 'mitir' 37 mitir ', oo lagu aasaasay Bostanlı Creek oo ku taal jidka tareenka, ayaa lagu dhammeystirey ugu yaraan saddex maalmood. Codka 150 [More ...]
Mashruuca tareenka ee magaalada Kent Meydani-Otogar wuxuu dhex marayaa khatarta muhiimka ah
Isgoyska xasaasiga ah waxaa laga gudbay khadka tareenka ee Bursa City Square-Otogar. Qolalka qaybta hore ee Bridge Square Bridge [More ...]
Waxaa jira xaalado aan soconin tareenka garoonka diyaaradaha ee 3: 2018, oo markii ugu horreysay lagu dhawaaqay inuu furmayo Oktoobar 3, ka dibna dib loo eegay bishii Febraayo. Iyada oo taariikhda garoonka diyaaradaha ay soo dhowdahay, walaac ayaa kor u kacay. Khabiiro tilmaamaya in maddaarka laga yaabo in aan la furin maalinta la beegsaday, warbixinta EIA [More ...]
RayHaber 21.03.2017 Warbixinta Shirka
Shaqooyinka ka hortagga dabka ee wadada tareenka ayaa la furi doonaa waxaana mashiinada adeegga la kireysan doonaa sanduuqa Ductile Casting dhameystiran Axle Box oo leh TSI ayaa la iibsan doonaa (TÜLOMSAŞ) Aliağa-Çandarlı-Bergama Dhismaha Kaabayaasha Cusub ee Tareenka iyo Dhismaha Dekada Çandarlı [More ...]
Mashruuca URAYSİM Mashruuca Kıraç Isaga oo Fiirinaya Goobta: CHP Eskişehir Ku-xigeenka Utku Çakırözer, Deegaanka Ilaalinta Beeraha ayaa lagu caddeeyay mashruuca Alpu Plain National Rail Systems Center (URAYSİM) inuu keenay ajendaha Golaha. Beeraleyda Alpulu [More ...]